Weerar ku billowday qaraxyo oo ka dhacay G/Baay | KEYDMEDIA ENGLISH
Weerar ku billowday qaraxyo oo ka dhacay G/Baay
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerarka ay ku dishay Sarkaal Ciidan oo magaciisa ku sheegtay Cali Mad Yeeroow, sidoo kalena ay ku dhaawacday askar kale oo Dowladda katirsan.
QANSAX-DHEERE, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa saakay aroortii weerar culus ku qaadey saldhig Ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Qansax-Dheere, ee gobolka Baay.
Dagaal culus ayaa dhacay weerarka kadib, waxayna dadka degaanka ay sheegeen inay maqlayeen qaraxyo iyo rasaas mudo ku dhaw hal saac socotay, iyadoo markii dambe laga adkaadey Kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaadey.
Isbitaalka degmada waxaa la geeyay dhaawacyada dhowr askari iyo taliye lagu magacaabo Xasan Eylow, waxaana dhimashada la xaqiijiyay hal sarkaal. Lama oga khasaaraha dhanka Al-Shabaab soo gaarey.
Mas'uuliyiinta amniga ayaa sheegay in mudooyinkii dambe ay kusoo xoogeysteen weerarada Al-Shabaab, kadib markii Ciidanka Itoobiya ay ka baxeen degmada, iyagoo u guurey magaalada Diinsoor, oo Maamulka Koonfur Galbeed gacanta ku hayo.
Al-Shabaab ayaa kala jartay degmooyinkii laga saarey ee gobollada Baay iyo Bakool, iyadoo fadhisa wadooyinka isku xira, oo ay geliso miinooyin ay ku weerarto gaadiidka militeriga, waxayna kahor istaagtay ganacsatada inay badeecooyinka isagu kala gudbiyaan.
Comments Topics: al-shabaab ciidanka dowladda dagaal koonfur galbeed